MM Popular – Page 8 – News And Videos
” မြတ်ကေသီအောင် တို့ တူဝရီးရဲ့ အလန်းစားပုံတွေ ” . တူမနဲ့အပြိုင် နုပျိုနေတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်နဲ့ ငယ်သွေးကြွယ်တဲ့ အလှပဂေး ပက်ထရစ်ရှာတို့ရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ် … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
မွတျကသေီအောငျဆိုတာ ၀ါရငျ့အနုပညာရှငျမငျးသမီးတဈဦးမှနျးလူတိုငျးသိကွပါတယျ ။ ငယျစဉျထဲက ခြောမောတဲ့မငျးသမီးတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ သူမဟာ ခုအရှယျရလာခြိနျမှာလညျး အလှတှေ မလြော့သေးဘဲ နုပြိုလှပနဆေဲပါပဲ ။ မွတျကသေီအောငျရဲ့ တူမလေးကတော့ အားလုံးသိကွတဲ့ စူးရှနိုငျ ( ချေါ ) ပကျထရဈရှာပါ ။ ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား …
“အပူတွေမရှိစေချင်လို့ တူမတွေကို ယောက်ျားမယူနဲ့ ပြောထားတယ်” ဆိုတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပရိသတ်အချစ်တော် အူဝဲကတော့ သူရဲ့ တူမတွေကို…………… အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈလကျ နိုငျငံကြျောမငျးသားတဈဦးရဲ့ ခဈြဇနီး သားသမီးနှဈယောကျရဲ့ မိခငျ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော ဖွဈသူကတော့ အိန်ဒွာကြျောဇငျ ဖွဈပါတယျ။ ခတျေနှဈခတျေတိုငျ အောငျမွငျမှု လှပမှု ဖကျရှငျကမြှု စတဲ့ အရညျအသှေးတှကေို ထိနျးထားနိုငျပွီး ယနတေို့ငျ မငျးသမီးအခငျြးခငျြးအားကရြအောငျ အောငျမွငျနတေဲ့ သူမအတှကျ ပရိသတျတှကေ ” ရငျဘတျထဲက ဓား” ဇာတျကားနဲ့ ဒုတိယ အကယျဒမီဆုကို ပေးလို့ထားလိုကျပါပွီ။ ဘုရား ဘုရား ဦးပိန်တံတားအောက်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပုဆိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ ချနေကြတဲ့စုံတွဲ….မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး အောက်က ပျဉ်ပြားတောင်၂ချမ်းကွဲသွားတယ်…ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ OMG ဟိန်းဝေယံနဲ့ဝိုင်းစုခိုးပြေးတဲညက ရိုက်ထားတာတဲ့…ကြမ်းတာတော့ပက်ပက်စက်စက်ပဲ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားရေ… ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာမ ကျောင်းအိမ်သာထဲမှာ …
“ကျော်ထက်အောင်ရဲ့ပျော်စရာမိသားစုဘ၀လေး” သူ့ကတော့ ကြည်နှုးစရာမိသားစုလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်နေပေမဲ့ သူ့ပရိသတ်ကတော့ မေးနေကြပါပြီ…. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ကွညျနှုးစရာမိသားစုလေးပါပဲ။ပနျးခွံထဲကို အပနျးဖွဖေို့လာရောကျခဲ့ကွတဲ့ မိသားစုလေးပါ။ကြျောထကျအောငျကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနဲကအတူ ဘောလုံးပဈတမျးကစားနပေါတယျ။ပြျောစရာကောငျးပွီးနှေးထှေးတဲ့ မိသားစုပုံရိပျလေးပါပဲ။သရုပျဆောငျကြျောထကျအောငျ ပွုံးပြျောနပေါတယျ။ ဘုရား ဘုရား ဦးပိန်တံတားအောက်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပုဆိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ ချနေကြတဲ့စုံတွဲ….မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး အောက်က ပျဉ်ပြားတောင်၂ချမ်းကွဲသွားတယ်…ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ OMG ဟိန်းဝေယံနဲ့ဝိုင်းစုခိုးပြေးတဲညက ရိုက်ထားတာတဲ့…ကြမ်းတာတော့ပက်ပက်စက်စက်ပဲ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားရေ… ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာမ ကျောင်းအိမ်သာထဲမှာ အရှက်မရှိကြမ်းနေကြတာကို ကျောင်းသားလေးကခိုးရိုက်ထားတာ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည်နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တဲ့…လုံးဝထင်မထားဘူး…မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ သူကတော့ သူရဲ့ဖဘေု့တျမှာ “ဖဖေရေယျ….. မမေရေယျ….. သမီးလေးရယျ………. ဒီလိုအေးခမျြးလုံခွုံ၊ ပြျောရှငျစှာနနေိုငျတာဘာကွောငျ့လို့ထငျပါလညျး………… မကွာခငျ အဖွနေဲ့အတူပွနျလာခဲ့ပါ့မယျ” လို့သူကတော့ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့အတူရေးပွီးတငျထားခဲ့ပါတယျ …
သင်တို့ ကို အံ့သြသွားစေမယ့် အနုပညာရှင်များရဲ့ အသက်များ တကယ်ကို မထင်ထားမိတာ အပြည့်အစုံ –
အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ သူတို့ရဲ့ အရှယျတငျတဲ့ နုပြိုမှုတှကွေောငျ့ ငယျရှယျတယျလို့ ထငျရတဲ့ သူတှရှေိသလို အခြို့ ကတော့ သူတို့ရဲ့ ရငျ့ကကျြမှုတှကွေောငျ့ အသကျအရှယျထကျပိုပွီး ကွီးတယျလို့ထငျရတဲ့ သူတှမြေားစှာရှိပါတယျ။ အောကျမှာတော့ ပရိသတျတှေ မထငျမှတျထားလောကျအောငျ အသကျကွီးလာတဲ့ အနုပညာရှငျတှရှေိသလို အရမျးငယျသေးတဲ့ ဆယျကြျောသကျအနုပညာရှငျတှရေဲ့ အသကျတှဖွေဈပါတယျ။ ဘုရား ဘုရား ဦးပိန်တံတားအောက်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပုဆိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ ချနေကြတဲ့စုံတွဲ….မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး အောက်က ပျဉ်ပြားတောင်၂ချမ်းကွဲသွားတယ်…ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ OMG ဟိန်းဝေယံနဲ့ဝိုင်းစုခိုးပြေးတဲညက ရိုက်ထားတာတဲ့…ကြမ်းတာတော့ပက်ပက်စက်စက်ပဲ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားရေ… ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာမ ကျောင်းအိမ်သာထဲမှာ အရှက်မရှိကြမ်းနေကြတာကို ကျောင်းသားလေးကခိုးရိုက်ထားတာ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည်နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တဲ့…လုံးဝထင်မထားဘူး…မယုံရင် …
“ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုရရှိလိုက်တဲ့ကြာစိ” ချစ်ဇနီးလေးဆီကနေ တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ရတနာလေး…. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိ်ပ်ပါ)
လူရှငျတျောလောကထဲမှာ လူကွိုကျမြားလှတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကွာစိကိုတော ပရိတျသတျတှသေိကွမယျထငျပါတယျ။ ဖိုကျစတားအဖှဲ့ကနေ လူတှကေို ပွုံးရယျအောငျ အမွဲလုပျဆောငျပေးနတေဲ့ ကွာစိကတော့ တကယျဟာသဉာဏျရှိလှတဲ့လူတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျတှရေော ကွာစိရဲ့ ဟာသလေးတှကေို ကွညျ့ဖွဈရဲ့လား။ ဘုရား ဘုရား ဦးပိန်တံတားအောက်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပုဆိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ ချနေကြတဲ့စုံတွဲ….မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး အောက်က ပျဉ်ပြားတောင်၂ချမ်းကွဲသွားတယ်…ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ OMG ဟိန်းဝေယံနဲ့ဝိုင်းစုခိုးပြေးတဲညက ရိုက်ထားတာတဲ့…ကြမ်းတာတော့ပက်ပက်စက်စက်ပဲ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားရေ… ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာမ ကျောင်းအိမ်သာထဲမှာ အရှက်မရှိကြမ်းနေကြတာကို ကျောင်းသားလေးကခိုးရိုက်ထားတာ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ၀တ်မှုံရွှေရည်နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တဲ့…လုံးဝထင်မထားဘူး…မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား …
” ချစ်သူများနေ့မှာ အချစ်တွေပြန်ပေါင်းစည်းသွားတဲ့ သူမတို့စုံတွဲ ” တကယ်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးနော်…. ( အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ။ )
အဆိုတျောခမျြးခမျြးနဲ့ ဘုဏျးသိုကျတို့အခဈြဇာတျလမျးလေးကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ စိတျဝငျစားဆုံးဇာတျလမျးလေးတဈခု ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သမီးငယျလေးတဈယောကျရှိသေးတဲ့ သူမတို့အိမျထောငျရေးမှာ နှဈဦးသား ပွနျလညျပေါငျးစညျးဖို့ကို ပရိသတျမြားက မြှျောလငျ့နခေဲ့ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ OMG ကချင်မလေးတစ်ယောက် ကာမဆေးကျွေးပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံရ….နာလွန်းလို့အော်နေတဲ့ အသံက ကြောက်စရာကြီး……….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ကျိူက်ထီးရိုးဘုရားဖူးဖို့တောင်ပေါ်တက်ရင်း ကောင်လေးကစိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခြုံကြားထဲမှာ ပြီးသွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား သာကေသမှာ အဖေအရင်းက သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို မိန်းမမရှိတုန်းမုဒိန်းကျင့်…..သမီးလေးသနားပါတယ်ဗျာ..သွေးတွေတောင်ထွက်လို့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အိချောပိုနဲ့ကောင်းပြည့်ဟိုတယ်မှ ကဲနေကြတဲ့ဗွီဒီဖိုင် ထွက်ပေါ်…….ကြမ်းတာ မြင်လို့တေင်မကောင်းဘူးဗျာ…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ပရိသတျကွီးဆန်ဒက ဒီဗယျလငျတိုငျးမှာတော့ လုံးဝပွညျ့ဝသှားခဲ့ပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ခမျြးခမျြးနဲ့ ဘုဏျးသိုကျတို့ရဲ့ …
နေတိုးရဲ့ အိမ်ထောင်မပြုရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
၀ါကြှတျမှာ အနုပညာရှငျတှေ ဟော..တဈယောကျ၊ ဟော..တဈယောကျ လကျထပျပှဲတှေ ကွီးကွီးကယျြကယျြ လုပျနကွေတဲ့အခြိနျ အားလုံးခဈြတဲ့ နတေိုးကတော့ သူနဲ့မဆိုငျပါဘူးတဲ့ဗြာ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။ 1 OMG ကချင်မလေးတစ်ယောက် ကာမဆေးကျွေးပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံရ….နာလွန်းလို့အော်နေတဲ့ အသံက ကြောက်စရာကြီး……….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ကျိူက်ထီးရိုးဘုရားဖူးဖို့တောင်ပေါ်တက်ရင်း ကောင်လေးကစိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခြုံကြားထဲမှာ ပြီးသွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား သာကေသမှာ အဖေအရင်းက သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို မိန်းမမရှိတုန်းမုဒိန်းကျင့်…..သမီးလေးသနားပါတယ်ဗျာ..သွေးတွေတောင်ထွက်လို့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အိချောပိုနဲ့ကောင်းပြည့်ဟိုတယ်မှ ကဲနေကြတဲ့ဗွီဒီဖိုင် ထွက်ပေါ်…….ကြမ်းတာ မြင်လို့တေင်မကောင်းဘူးဗျာ…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အနုပညာမှာ …
ချစ်သက်တမ်း(၅)နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ သဇင်…သဇင်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါပြီ….
တဈခြိနျက ဆယျကြျောသကျဘဝတုနျးက အရမျးကွိုကျခဲ့ရတဲ့ နာမညျကွီးအဆိုတျော No အဖှဲ့ဆိုရငျ မသိတဲ့သူမရှိသလောကျပါပဲ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့မိနျးကလေး(၃)ယောကျအဖှဲ့ဖွဈပွီး သဇငျကလညျး တဈဦးအပါအဝငျပါပဲ။ မိနျးကလေးပရိသတျတှနေဲ့ ထပျတူကမြယျ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှသေီဆိုခဲ့တဲ့အပွငျ သရုပျဆောငျဘကျမှာ ခွဦေးလှညျခဲ့ဖူးသူမို့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားသူဖွဈပါတယျ။ 1 OMG ကချင်မလေးတစ်ယောက် ကာမဆေးကျွေးပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံရ….နာလွန်းလို့အော်နေတဲ့ အသံက ကြောက်စရာကြီး……….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ကျိူက်ထီးရိုးဘုရားဖူးဖို့တောင်ပေါ်တက်ရင်း ကောင်လေးကစိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခြုံကြားထဲမှာ ပြီးသွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား သာကေသမှာ အဖေအရင်းက သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို မိန်းမမရှိတုန်းမုဒိန်းကျင့်…..သမီးလေးသနားပါတယ်ဗျာ..သွေးတွေတောင်ထွက်လို့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အိချောပိုနဲ့ကောင်းပြည့်ဟိုတယ်မှ ကဲနေကြတဲ့ဗွီဒီဖိုင် ထွက်ပေါ်…….ကြမ်းတာ မြင်လို့တေင်မကောင်းဘူးဗျာ…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့မကျြခွပွေတျနတောကွာပွီဖွဈတဲ့ သဇငျတဈယောကျ …
အခုလေးတင် ဘန်ကောက်ကနေဖုန်းဆက်ပေးလာတဲ့ သိန်း၅၀၀တန်VIPပေါက်ဂဏာန်းတွေနော် ။ယုံတဲ့သူပေါက်မယ် မယုံရင်မပေါက်ဘူး။ ကွန်မန့်မှာ *3D* မန့်ပြီး အမြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်။ မပေါက်ရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်။
(1) OMG ကချင်မလေးတစ်ယောက် ကာမဆေးကျွေးပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံရ….နာလွန်းလို့အော်နေတဲ့ အသံက ကြောက်စရာကြီး……….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ကျိူက်ထီးရိုးဘုရားဖူးဖို့တောင်ပေါ်တက်ရင်း ကောင်လေးကစိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခြုံကြားထဲမှာ ပြီးသွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား သာကေသမှာ အဖေအရင်းက သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို မိန်းမမရှိတုန်းမုဒိန်းကျင့်…..သမီးလေးသနားပါတယ်ဗျာ..သွေးတွေတောင်ထွက်လို့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အိချောပိုနဲ့ကောင်းပြည့်ဟိုတယ်မှ ကဲနေကြတဲ့ဗွီဒီဖိုင် ထွက်ပေါ်…….ကြမ်းတာ မြင်လို့တေင်မကောင်းဘူးဗျာ…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ (2) ဘုရား ဘုရား ဦးပိန်တံတားအောက်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပုဆိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ ချနေကြတဲ့စုံတွဲ….မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး အောက်က ပျဉ်ပြားတောင်၂ချမ်းကွဲသွားတယ်…ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ OMG ဟိန်းဝေယံနဲ့ဝိုင်းစုခိုးပြေးတဲညက ရိုက်ထားတာတဲ့…ကြမ်းတာတော့ပက်ပက်စက်စက်ပဲ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ …
” စိုးမြတ်သူဇာကြောင့် မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့ ကိုရန်လေး ” . ကိုရန်လေးနဲ့ စိုးမြတ်သူဇာဆိုတာ ဟိုးအရင်ကတည်းက အလွန်ရင်းနှီးခင်မင်သူတွေပါ … ကိုရန်လေးတစ်ယောက်မျက်ရည်ဝဲသွားလောက်အောင် မကြီးစိုး ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ကိုရနျလေးလို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ မငျးသားရနျအောငျကတော့ မကွီးစိုး ဇရေဲထကျတို့နဲ့ “ပငျလယျလုပှဲ” ဆိုတဲ့ဇာတျကားကို သနျလငျြမှာရိုကျကူးနတေယျလို့သိရပါတယျ ။ သီတငျးကြှတျအခါသမယဖွဈတဲ့အတှကျ ရိုကျကှငျးမှာတငျ မကွီးစိုးက သီတငျးကြှတျကနျတော့ပှဲလေးတဈခုလုပျတဲ့အခါ အကနျတော့ခံရတဲ့ ရနျအောငျခမြာ ပီတိဖွဈပွီး မကျြရညျမြားတောငျ ၀ဲတယျလို့ဆိုပါတယျ ။ 1 OMG ရွှေထူးနဲ့နန်းခင်ဇေယျာ ချောင်းသာဟိုတယ်မှာ ကားရိုက်ထွက်တုန်း စပါယ်ရှယ်ခိုးစားနေကြတာ ချောင်းရိုက်လေးနော်….အခုရိုက်အခုတင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG မေကဗျာရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးပုံတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်… မေကဗျာရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးပုံပေါက်ကြားမှု…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နေတိုး မှ ၀တ်မှုံရွှေရည်ကို စပါယ်ရှယ် ပေါင်ကြားထဲမှာ မှုတ်ပေးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ….မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်….အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ညအချိန် …